जनता भ्वाइस calendar_today २१ असार २०७७, 1:46 am
काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले हाल कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गरी मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गरिँदै आएको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालय तहमा पुगेको छ । नेपालमा २०४९ सालदेखि कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु भएकोमा केन्द्रीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।
कार्यविधि परीक्षा बोर्डले बनाउने
यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको छ । साथै परीक्षा सञ्चालनको मापदण्ड, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नम्बर दिने मापदण्ड तथा प्रमाणीकरणको आधार लगायतका विषयमा कार्यविधि स्पष्ट गरिने महानिर्देशक दाहालले बताएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। बोर्डले नै विद्यार्थीको अन्तिम अभिलेख हेर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत जारी गर्ने भएकाले कार्यविधि बनाउने अधिकार बोर्डलाई दिइएको हो ।
यसका साथै हाल स्थगित अवस्थामा रहेका कक्षा ११ का परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन अब विद्यालयबाटै हुनेछ। file Photo
लिटिल स्टारले पूरा गर्यो २५ वर्ष, रजत जयन्तीमा भव्य कार्यक्रम
केब्स सिनियर स्काउटको हाइकिङ्, टिपिकल पाककलामा माहिर विद्यार्थी (शैक्षिक रिपाेर्ट)
काकलिङ् माविमा शनिबार सार्वजनिक ‘चुरोकुरो’, न्यानो कपडामा विद्यार्थीहरु गमक्कै
Kumar Shrestha calendar_today १२ साउन २०७८, 6:37 am
रामेछाप ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले लापरबाहि गरेको कारण समस्यामा परेको भन्दै स्थानियहरू विद्युत कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् । रामेछाप वितरण केन्द्रले अनिन्त्रित रुपमा बत्ति काट्दा सेवाग्राहिहरूको भौतिक क्षति समेत भएको कारण धर्ना बस्न परेको हो ।
बिगत दुई महिना देखि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित लोडश्रेङिङ भएको भन्दै स्थानियहरू आक्रोशित भएका छन् । एक दिनमा १७ पटक सम्म बत्ति जाँदा सर्वसाधरण सँगै व्यवसायिहरुलाई समेत समस्या भएको युवा व्यवसायी जयराम मानन्धर बताउँछन् । पटक पटक बत्ति जाँदा मोबाईल, कम्युटर, एक्सरे मेसिन सहित जलेको व्यवसायिहरूको गुनासो छ । साथै विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न नजाँदा समेत सेवाग्राहिहरू सँग जरिवाना असुलेको उनिहरूको गुनासो छ ।
धेरै जसो समय बिद्युत नहुँदा बैङ्किङ तथा सरकारी कार्यलयको काममा समेत ढिलाई हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ । लोडश्रेणीङको समयमा पसलहरुमा चर्को मुल्य तिरेर काम गराउन परेको उनिहरू बताउँछन् ।
रामेछापको मन्थलीमा हुने गरेको अत्याधिक गर्मीका लागि पनि विद्युतको अत्यावश्यक छ । सरोकारवालाहरूले बारम्बार रामेछाप वितरण केन्द्रमा गुनासो गर्दा समेत लोडश्रेणिङ व्यस्थापन नभए पछि सरोकारवालाहरू धर्नामा उत्रेको देवकोटाचोक टोल सुधार समितिका अध्यक्ष सुरेश उदाश बताउँछन् । अब पनि यसको समाधान नभएमा विद्युत प्राधिकरण रामेछापको कार्यालय घेराबन्दि गर्ने तथा तालाबन्दि गर्ने उनिहरूको भनाई छ ।
समस्या समाधानमा लागि खबर गरेर आउँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा नबसेकोमा सेवाग्राहिले आपत्ति जनाएका छन् । सेवाग्राहिले तिरेको पैसाले तलब खाएर सेवाग्राहि कै कुरा नसुन्ने मान्छे सेवाग्राहिको हितमा नहुने नेपाली कांग्रेस, रामेछापका सचिव लेखबहादुर कार्कीको भनाई छ ।
यहि प्रकृतिको समस्या दोहोरिएर सेवाग्राहिमा नियमित विद्युत आपुर्ती नभए समयको माग अनुसार विरोधमा उत्रिने समेत रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव घिमिरेले सांकेतिक चेतावनी दिएका छन् ।
लामो दुरिबाट बिद्युत ल्याएको कारण बारम्बार बत्ति जाने गरेको विधुत कार्यालय रामेछापका प्रमुख कृष्णहरि दहाल बताउँछन् । वर्षाको बेलामा रुख विरुवा लडेर तार चुडाउने र कहाँ बिग्रेको भनेर पत्ता लगाउनै समय लाग्ने भएकोले समस्या आई रहेको उनको भनाई छ ।
अघिल्लो वर्षाको बेलामा केहि समय लोडश्रेणिङ हुने गरेको भए पनि यति धेरै नहुने गरेको सेवाग्राहिको गुनासो छ । कार्यालय प्रमुखकै लापरबाहीका कारण सेवाग्राहिले सास्ती भोग्नु परेको स्थानिय बताउँछन् ।
म किसान सँग सति जान सक्दिन-महेश बस्नेत
जनता भ्वाइस calendar_today ७ साउन २०७८, 12:55 am
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद महेश बस्नेतले केपी ओलीको खेमा छोडेर माधव नेपालतिर लागेका किसान श्रेष्ठसँग आफू सति जान नसक्ने बताएका छन्।
केही मिडियाले किसान श्रेष्ठले ओली खेमा छाडेकाले अब महेश बस्नेतले पनि त्यो खेमा छाड्न लागेको भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति संकेत गर्दै बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन्।
३ साउनमा शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासका मत लिँदा ओली खेमाका सांसद श्रेष्ठसँगै ८ जनाले फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई मत दिएका थिए। श्रेष्ठका घनिस्ट मित्र बस्नेतले भने श्रेष्ठले खेमा परिवर्तन गर्दैमा आफू त्यता नलाग्ने बताएका हुन्।
‘मित्र किसान श्रेष्ठसँगको मेरो सम्बन्ध राजनैतिक सम्बन्ध हो, पौराणिककालको श्रीमान श्रीमती जस्तो मृत्युमा सति जाने जस्तो सम्बन्ध होइन’, उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘केही मिडिया किन रमाएका हुन्?’
मित्र किसान श्रेष्ठ संगको मेरो सम्बन्ध राजनैतिक सम्बन्ध हो,पौरानिकखालको श्रीमान श्रीमती जस्तो मृत्युमा सति जाने जस्तो सम्बन्ध होइन केही मिडिया किन रमाएका हुन् ?
— Mahesh Basnet (@MaMaheshBasnet) July 21, 2021
चन्द्र नहरको बाँध लगातारको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा कटान हुँदा करिब तीन सय घर डुवानमा
जनता भ्वाइस calendar_today ७ साउन २०७८, 12:00 am
साउन ७ बिहिबार।
नेपालकै पुरानो मध्येका एक सप्तरीस्थित चन्द्र नहरको बाँध लगातारको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा कटान हुँदा करिब तीन सय घर डुवानमा परेको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकास्थित चन्द्र नहरको बाढीले कटान गर्दा करिब तीन सय घर डुबानमा परेको हो ।
नहरको बाँध फुटेर सप्तकोसी नगरपालिकाका वडा न १, २, ४ र ११ का गरी तीन सय घर डुबानमा परेको सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख उत्तम गौतमले जानकारी दिएका छन् । चन्द्र नहरको बाँध भत्केर ती वडाका घर घरमा दुई/तीन फिटसम्म पानी जमेको उनले जानकारी दिए ।
सोमबार साँझदेखि सुरु भएको वर्षा मंगलबार विहान पनि जारि रहँदा सप्तकोसी नगरपालिकाका जुटपानी, सत्रापत्र, अमहा, ट्याङ्ग्रा लगायतका खहरे खोलामा आएको बाढीले चन्द्रनहरको बाँध दुई ठाँउमा भत्काएको स्थानीय अमर खवासले बताए ।
बाढीले बाँध सँगै नहर छेउको ठूलो सिमलको रुख समेत ढालेर दुई स्थानमा गरी करिब ५० मिटर नहर कटान गरेको उनको भनाई छ । नगरक्षेत्रका खहरेखोलाको बाढी ओभरफ्लो भई निरन्तर धक्का दिन थालेपछि नहर नै कटान गरी क्षतिग्रस्त बनाएको स्थानियवासी दिनेश शर्माले बताए ।
विगतमा पनि सप्तकोसी नगरपालिका ९ कमलपुरमा चन्द्र नहरको बाँधले उच्च वहाव थेग्न नसकि फुटेर करोडौंको क्षति पु¥याएको थियो ।
यता जिता नदीको बाढीले जिल्लाकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ७ मंसापुर, वडा नं. ५ बरसाइन र वडा नं. ८ तोपाका करिब सय भन्दा बढी घर डुबानमा पारेको गाउँपालिका अध्यक्ष सतीशकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
दुई दिन यता निरन्तरको वर्षाका कारण जिल्लाका नदीहरूमा जलस्तर निकै बढेकोले स्थानिय प्रशासनले तटिय क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ । राजधानीबाट ।
ओली गुटको २० सांसद माधव गुटमा भित्रिँदै!
जनता भ्वाइस calendar_today ६ साउन २०७८, 11:54 pm
साउन ०७, काठमाडौँ – केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बर्खास्त भएसँगै नेकपा एमालेको संस्थापन समूहमा पहिरो गएको छ ।
ओली गुटका सांसदहरु धमाधम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गुटमा भित्रिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ८ जना सांसदहरु ओली समूहबाट विद्रोह गरेर माधव समूहमा भित्रिएका थिए, जुन अनपेक्षित घटना थियो ।
यसरी ओली समूह परित्याग गर्ने सांसदहरुको संख्या अझै बढ्दै जाने नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
२०÷२५ दिनभित्रै एमालेमा आफूहरुको बहुमत पुग्ने परिस्थिति निर्माण भैरहेको माधव समूहका नेता मेटमणि चौधरीको दाबी छ ।
ओली समूहमा पिल्सिएर बसेका तर बोल्न नसकेकाहरुको सानो हैन ठूलो समूहले विद्रोह गरेर माधव नेपाललाई साथ दिने उहाँको दाबी छ ।
ओली गुटबाट सांसद तान्न अहिले पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले र सांसद किसान श्रेष्ठ सक्रिय छन् ।
माधव समूहको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले १५÷२० जना सांसद आफूले तान्न सक्ने दाबी गर्दै बहुमत निर्माण गरेर ओलीलाई हटाउने रणनीति लिन माधव नेपाललाई आग्रह गरेको श्रोतको दाबी छ ।
श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदै माधव समूहमा भित्रिएका नेता हुन् ।
उहाँले सर्वाेच्चको फैसलाको सम्मान गर्न आफू माधव समूहमा आएको बताउनुभयो ।
हुन त एकातिर ओली समूहका सांसदहरु माधव समूहमा भित्रिन थालेका छन् भने अर्काेतिर माधव समूहमै रहेका नेताहरुले पनि नेता नेपालको साथ छाड्ने तयारी गरेका छन् ।
भीम रावलले समेत बैठक बहिष्कार गरेपछि माधव समूह पनि संकटमा रहेको विश्लेषण भैरहेको छ ।
तर नेता मेटमणि चौधरीले एकताको वातावण बनाउन नेताहरुले गरेको कसरतलाई गुट त्यागेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
माधव समूहमा कुनै संकट नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि माधव समूहमा १५ देखि २० सांसद थप्ने दाबी गरेर सोही अनुसार कसरत गरिरहेको विश्वस्त श्रोतको दाबी छ ।
आलेले प्रधानमन्त्री देउवालाई ओली समूहका ८ सासदको मत दिलाउने बचन पूरा गरेको चर्चा छ ।
फेरि पनि बहुमत जुटाएर एमालेमा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्म लगाउने तयारी भैरहेको श्रोतले बताएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले सत्ता र शक्तिको नजिक रहन सांसदहरुले गुट फेर्ने विषय नौलो नरहेको बताउनुभयो ।
अहिले ओली समूहले गरिरहेको अराजक क्रियाकलापले पनि माधव समूह थप बलियो बन्दै जाने उहाँको विश्लेषण छ ।
हाल एमालेमा १ सय २१ जना सांसद छन् । ती मध्ये हालै भित्रिएका ८ सहित माधव समूहमा झण्डै ३१ जना सांसद रहेको अनुमान छ ।
माधव समूहका नेताहरुको दाबी पत्याउने हो भने छिट्टै ओली गुट त्यागेर थप १५ देखि २० जना सांसदले माधव नेपाललाई साथ दिने तयारी छ ।
२० जना थपिएछन् भने पनि माधव समूहको जम्मा सांसद संख्या ५१ पुग्ने छ ।
दलमा बहुमत पुग्न कम्तीमा ६१ जना सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेमा तत्काल माधव समूहको बहुमत जुट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
तर नेपालको राजनीतिमा अनुमान गरिए भन्दा फरक दृष्यहरु देखिने गरेकाले माधव समूहमा बहुमत जुट्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन।नेपाली नेटवर्कले लेखेको छ ।
बस्ती मुनीको सडक पहिरियो
Kumar Shrestha calendar_today ३ साउन २०७८, 3:19 am
निर्माण ब्यवसायिले कमजोर संरचना निर्माण गरेको कारण सडक भत्किएको स्थानीयको आरोप
रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं. ८ को जखनिटारमा बस्ती मुनीबाट निर्माण गरिएको सडक पहिरिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । कालोपत्रे भएको १ महिना पनि नबित्दै सडकमा पहिरो गएपछि स्थानीय त्रसित भएका हुन् ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं. ८ जखनिटारमा बस्ती मुनीबाट निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडकमा पहिरो गएपछि बस्ती समेत जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयबासी त्रसित भएका छन् । सडकमा पहिरो गएपछि सडक छेउमा घर भएका पाँच परिवारका मानिस घर छोडेर आफन्तमा गई बसेका छन् । स्थानीयको घरको समेत संरक्षण हुने गरि सडक तत्कालै निर्माण गरिदिन स्थानीय सारदा श्रेष्ठले सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन् ।
मन्थली– गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत जखनिटारस्थित सडकको डिलपटीको भागमा लगाइएको मेशिनरी पर्खाल भत्किनुका साथै सडकको बीचभागसम्म पहिरो गएको छ । निर्माण ब्यवसायिले कमजोर संरचना निर्माण गरेको कारण सडक भत्किएको स्थानीयको आरोप छ । जखनिटारको बस्तीमुनी सडक पहिरो जानुका साथै सडकको ठाउँठाउँमा भासिने र चर्किने भएको छ । सडक निर्माणको क्रममा स्थानीयबासीले निर्माण कार्य गुणस्तरहिन भएको भनि विरोध गर्दा समेत निर्माण ब्यवसायिले बेवास्ता गरेको कारण कालोपत्रे भएको १ महिना पनि नवित्दै सडक भत्किएको स्थानीय यसोदा माझीको भनाई छ ।
सडक भत्किदा सिंचाई कुलोमा समेत क्षति पुगेको छ । धान रोप्ने बेलामा सडकमा पहिरो गएर सिंचाई कुलो अवरुद्ध हुदा ३ सय रोपनी भन्दा बढी खेतको रोपाई समेत प्रभावित भएको मन्थली नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य गणेश बहादुर माझी बताउँछन् ।
सडकले पुरिएको सिंचाई कुलो तत्कालै सुचारु गराउने मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ । पहिरो गएको सकड तथा सडक सुरक्षाको लागि लगाइएको मेशिनरी पर्खा तत्कालै सम्बन्धित निर्माण ब्यवसायिलाई निर्माण गर्न लगाउने पनि मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले बताए ।
मन्थली– गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा लुमिनस कन्स्टक्सनले ९ सय मिटर सडक कालोपात्रे गरेको थियो भने नौलो सफल बिहानी निर्माण सेवाले मेशिनरी पर्खाल निर्माण गरेको थियो ।
हत्यारालाई कार्वाहि गर्न माग गर्दै प्रर्दशन
जनता भ्वाइस calendar_today १ साउन २०७८, 1:11 pm
रामेछाप । हत्यारालाई कार्वाहि गर्न माग गर्दे आज मन्थलीमा दिनभर प्रर्दशन गरिएको छ । असार १ गते राति मन्थली नगरपालीका वडा नं १२ गेलुको सिग्राल वस्ने काले भन्ने बर्ष ३६ को राजकुमार बुढाथोकिको मृत्युको विषयमा प्रहरी प्रशासन गम्भिर नभएको र स्वतन्त्र पुर्वक छानविनको माग गर्दे हत्यारा पत्तालाउन स्थानिय हरुले मन्थलीमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
गत असार १ गते दिनभर स्थानिय प्रभुराम बुढाथोकिको घरमा काम गरेका काले राति खानपिन गरि सोहि घरमा बास बसेका थिए । भोलिपल्ट २ गते विहान मृतक कालेकि आमा घाँस काट्न जंगल जाँदा खड्काकोमा पुगेर छोराको बारेमा सोधखोज गरेका थिए । त्यतिबेला खडकाकि श्रीमतीले विहानै घरबाट निस्किएर हिडेकाले कतै गएको हुन सक्ने जवाफ दिएको स्थानिय पुरुषोत्तम बुढाथोकिले जानकारी दिए ।
भोलीपल्ट स्थानिय चनौटे भिरको फेदमा कालेको लास अडेस लागेर बसेको अबस्थामा गाउँलेहरुले देखेपछि पुलिसलाई खबर गरेका थिए । कालेको लास भिरबाट खसेको जस्तो देखिएपनि उसको टाउकोमा गहिरोचोट देखिए बाहेका अन्य कुनै लक्षण देखिएको थिएन् । करीब ३ सय मिटर अग्लो भीर भएपनि कालेको शरिरमा अरु कुनै पनि चोट नदेखिएको अवस्थामा गाउँलेहरुले फेला पारेका थिए ।
परिवारले लिखित रुपमा किटानी जाहेरी दिएको र सोहि आधारमा पर्शुराम बुढाथोकि लगायत २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धन गरिरहेको रहेको छ ।
निज कालेको परिबार सबै सुस्त मनस्थीतीका भएको र उनिहरुको समाज प्रहरीमा पनि पहुच नभएकोले उनको असलि हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी गम्भिर नदेखिएको आरोप गाउँलेहरुले लगाएका छन् ।
रामेछाप जिल्लाका प्रहरी नायब उपरिक्षक नवराज ढुङ्गाना भने यस घटनामा प्रहरीले गंभिरताका साथ अनुसन्धान गरेको बताए । उनका अनुसार घटनाको लगत्तै मृतककी आमाले आफ्नो छोराको लडेर मृत्यू भएको भनि जाहेरी दिएका थिए । तर पछि मृतककी बहिनिले आफ्नो दाजुको हत्या भएको भनि कोटानी जाहेरी दिएका आधारमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनास्थलमा सरकारी वकिल सहित आफू स्वयम पुगेर स्थानियहरूको सहयोगमा प्रमाण संकलन गरि सोहि आधारमा अनुसन्धान भई रहेकोले स्थानियहरूलाई शंका नगर्न समेत उनले आग्रह समेत गरे।
एक डोज लगाए पुग्ने अमेरिकन खोप भोलि नेपाल आउदै
जनता भ्वाइस calendar_today २७ असार २०७८, 6:24 am
२७ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीको १५ लाख डोज खोप नेपाल आउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार सो खोप सोमबार काठमाडौं आइपुग्नेछ।
अमेरिकाले दिने भनेको खोप सोमबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने डा. भट्टराईले ट्वीटर मार्फत जानकारी गराएका हुन् । अमेरिकाले कोभ्याक्स मार्फत प्रदान गरेको सो खोप एक डोज लगाए पुग्ने भएकाले सो खोप १५ लाख व्यक्तिलाई लगाउन सकिने उनको समेत उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
अमेरिकन सरकारले COVAX मार्फ़त अनुदानमा नेपाललाई दिन लागेको 15 लाख J & J Vaccine आगामी सोमबार बिहान काठमाण्डू आइपुग्ने भएको छ । US सरकार तथा पहलकर्ता सबैलाई धन्यबाद ।
— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) July 10, 2021
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा वडा अध्यक्षकै डोजर प्रयोग
Kumar Shrestha calendar_today २७ असार २०७८, 5:01 am
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष कृष्णहरी अधिकारीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आफ्नो डोजर प्रयोग गरेका छन् । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने उदेश्यले सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरुलाई काम नदिएर वडा अध्यक्षले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेका हुन् ।
मन्थली नगरपालिका–१२ मा पर्ने साँवाडाडा ( सिमलबोटे सडकको नाला सफा गर्ने काममा मानिसको प्रयोग नगरी फाइदा कमाउने उदेश्यले वडा अध्यक्षले डोजर प्रयोग गरेको भन्दै स्थानिय आक्रोसित भएका छन् । वडा अध्यक्षले रातको १∕२ वजे पछी डोजर लगाएर नाला सफा गर्ने काम आफ्नै नेतृत्वमा गरेको स्थानियले आरोप लगाएका छन् । रातको समयमा दोजर प्रयोग गरेर सडक नाला सफा गर्दा आफुले किनेर ल्याएको बालुवा समेत माटोले पुरेको स्थानिय सविना तमाङ्गले बताए।
आफुहरुले काम नपाएर कामको खोजिमा भौतारीएको बेला बेरोजगारको नाममा आएको योजनामा डोजर प्रयोग गरेको र केही आफु मातहतका युवाहरुलाई मात्र समेटेर वडा अध्यक्षले काम दिएको स्थानिय युवाहरुको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा व्यरोजगार युवाहरुलाई १ सय दिन काम उपलब्ध गराए बापत ५१ हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ तर बेरोजगारहरुको पेटमा लात हान्ने उदेश्यले २६ दिन मात्र काम लगाएर अन्य रकम वडा अध्यक्षले पचाउन खोजेको स्थानिय मनोज खत्री र बलराम खत्रीको आरोप छ । नाला खन्ने काममा समेत वडा अध्यक्ष अधिकारीले बेरोजगार युवाको नाममा स्कुलका बिद्यार्थीहरु प्रयोग गरेको स्थानिय बताउछन् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा डोजर प्रयोग भएको भन्दै नागरीकहरु उजुरी लिएर नगरपालिकामा पुग्दा समेत डोजरको प्रयोग भएको विषय आफुलाई कुनै जानकारी नभएको वडा अध्यक्ष कृष्णहरी अधिकारी बताउछन् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा मेसीन प्रयोग गर्न नपाउने र मेसीनको प्रयोग गर्न पर्ने भए नगरपालिका संग अनुमती लिएर मात्र मेसीनको प्रयोग गर्नु पर्ने मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लिलाराज पौडेल बताउँछन्् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ब्यरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने उदेश्यले लागु गरिएको भएपनी केही वडाका वडा अध्यक्षहरुले भने त्यस्को दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
अरनिको यातायात सेवा समितिको गाडि कार्वाहिमा
जनता भ्वाइस calendar_today २६ असार २०७८, 12:41 pm
रामेछाप २६ असार ।
यात्रीहरु संग दोब्बर भाडा लिने अरनिको बसलाई जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले कार्वाहि गरेको छ । शनिबार काठमाडौ बाट मन्थली तर्फ आउँदै गरेको बा ५ ख २९५ नं को अरनिको यातायात समितिको बसले यात्रीहरुलाई दोब्बर भाडा लिएर यात्रीहरुलाई ठगि गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर कार्वाहि गरेको हो ।
८ जना यात्रीहरुलाई दोब्बर भाडा लिएर काठमाडौबाट आउँदै गरेको सुचनाका आधारमा बस र बसको चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सबै यात्रीहरुको आधा भाडा फिर्ता गराई ३ हजार जरिवान गरि पुन गल्ती नदोहोर्याउने सर्तमा कागज गराएर छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरिक्षक नबराज ढुंगानाले जानकारी दिए।
अनुगमन टोली नपुग्दै पुग्यो खबर, १० बजे नै भए सबै पसल बन्द
जनता भ्वाइस calendar_today २६ असार २०७८, 11:25 am
रामेछाप । शुक्रबार बजार अनुगमनका लागि जिल्लाको अनुगमन टोली पुग्दा सिरसे र ढाँडे बजारका सबैजसो पसलहरु बन्द थिए । अरू दिन खुल्लानै रहने अधिकांश पसलहरु बिहान १० बजे नै बन्द गरिएको एक स्थानियले बताए । टोली ११ बजे सिरसे पुगेको थियो । टोलि बजारमा पुग्दा सबैजसो पसलहरु बन्द थिए ।
स्थानिय उपभोक्ताहरुका अनुसार – भुगोलको हिसाबले जिल्लाबाट टाढा र दुर्गम ठाउँ भएको र राज्यको उपस्थीति न्युन मात्रामा हुने हुँदा ब्यापारीहरुका लागि यहाँका बजार सुरक्षित पनि मानिन्छ । राज्यको उपस्थिति कमहुने यि बजारहरुमा अनुगमनका लागि टोली आउने कुराको सुचना ब्यापारीहरुले विहिबार बेलुकानै जानकारी पाईसकेका थिए ।
गत वर्ष अनुगमनका लगि पुगेको टोलीले सिरसे बजारमा भारि मात्रमा म्याद नाघेका सामाग्रि जफत गरेको थियो । जसका कारण ब्यापारीहरु अनुगमन टोलिको बारेमा सचेत थिए ।सोहि सुचनाका आधारमा आफुहरुले पसल बन्द गरेर हिडेको स्थानिय पौडेल थरका एक ब्यापारीले जानकारी दिनुभयो ।
दुर्गम भुगोलका कारण यहाँका अधिकांश पसलहरुमा म्याद नाघेका र ननाघेका सामाग्रिहरुको पर्वाहनै नगरि विक्रि गर्ने गर्दछन् । उपभोक्ताहरुले पनि त्यसको कुनै पनि पर्वाह गर्दैनन् । यस खालको प्रचलनले यहाँका पसलहरुलाई ब्यापार गर्न निकै सन्चो बनाएको छ ।
कतिपय पसल बन्द हुनुमा खेतिको मौसम पनि भएको र कतिपयले नियतबसनै पसल बन्द गरेर हिडेको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापका उपाध्यक्ष समेत रहेका अनुगमन टोलीका सदस्य दामोदर थापाले पनि स्वीकार्नु भयो । तर यसलाई ब्यापारीहरुले पनि सकरात्मक रुपमा बुझ्नु जरुरी भएको थापाको भनाई रहेको छ ।
आफुले नियतबस रुपमा नराखेको भएपनि संभावित म्याद नाघेका सामाग्रिको जफत र कानूनि झन्झटबाट मुक्ति पाउन पनि कतिपय ब्यापारीहरुले टोली आउने सुचनाका आधारमा पसल बन्द गराउनु परेको अर्का एक ब्यापारीले आफनो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्वीकार गरे ।
ओखलढुंगाको सिमाना स्थित लिखु किनारमा रहेका जिल्लाको लिखु तामाकोशि गाउँपालीका वडा नं २ मा पर्ने ति दुवै बजारमा गरि करिब ३ दर्जन भन्दा बढि पसल र होटलहरु रहेका छन् । जसमध्ये अनुगमन टोलीले सिरसेका औषधि मोवाईल लगायतका विभिन्न आधा दर्जन पसल मात्र अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस बाहेक टोलीले धोवि बजारका समेत दुई दर्जन जति पसलहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा केहि पसलहरुबाट म्याद नाघेका खाद्यन्न सामाग्रि समेत जफत गरेको थियो भने कतिपयलाई पसल दर्ता गराएर संचालन गर्नका लागि सचेत गराईएको टोलीका संयोजक उद्योग अधिकृत मेघराज गौतमले बताउनु भयो ।
रामेछाप नगरपालीकाले दियो अपाङ्ग लाई सामाग्रि
Kumar Shrestha calendar_today २० असार २०७८, 2:44 pm
रामेछाप २० असार । रामेछाप नगरपालिकाले आफना नगरमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि ब्ल्यांकेट र ह्विील चियर वितरण गरेको छ । उसले एक कार्यक्रमका विच आफना २ वडा बडाका अपाङ्ग हरुका लागि विभिन्न सामाग्रि वितरण गरिएको हो।
रामेछाप नगरपालीकाको आर्थिक सहयोगमा वडा नं ८ र ९ का अपाङ्गता भएका ब्यतिmहरुका लागि अपाङ्ग सचेतन सेवा केन्द्र रामेछापको आयोजनामा आईतबार ब्ल्यांकेट र हिवील चियर वितरण गरिएको जानकारी महिला तथा बाल वालीका शाखाकि प्रमुख विमला शर्माले वताईन् । उनका अनुसार समुदायमा आधारीत पुर्नस्थापना ( सिविआर ) कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेटबाट बडा नं ८ र ९ बडाका १ सय ३० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हरुका लागि सो सेवा उपलब्ध गराएको हो ।
सामाग्रिहरु बडा नं ८ का अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि रामेछाप नगरपालीकाका मेयर नर बहादुर थापा मगर र बडा नं ९ को ल्याङ्गल्याङ्गमा उपमेयर तथा सिविआर कार्यक्रमकि संयोजक सिर्जना खड्काले वितरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम अन्र्तगत बडा नं ८ का ५२ र बडा नं ९ का ३५ जनालाई ब्ल्यांकेट,३ जनालाई हवील चियर वितरण गरिएको हो । सामाग्रि हस्तान्तरण गरे संगै उनिहरुका लागि कानुनि परामर्श तथा अनुसिक्षण कार्यक्रम समेत प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नगरपालीकाका प्रमुख नर बहादुर थापा मगरले नगरपालीकाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका हक हित र अधिकारका लागि कुनै पनि कसुर नराख्ने बताउनु हुँदै आगामि बषर््ाहरुमा पनि उनिहरुको पक्षमा कार्यक्रम संचालन गर्नै प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो । त्यसैगरि उपमेयर सिर्जना खड्काले आफु संयोजक भएको नाताले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका क्षेत्रमा उनिहरुको बृत्ति विकासका काममा नगरले उल्लेख्य रुपमा काम गर्न सकेको अनुभुति आफुले गरेको बताउनु भयो ।
यो बर्ष भने दुई वडा कार्यक्रम अन्र्तगत बडा नं ८ का ५२ र बडा नं ९ का ३५ जनालाई ब्ल्यांकेट,३ जनालाई हवील चियर वितरण गरिएको हो । सामाग्रि हस्तान्तरण गरे संगै उनिहरुका लागि कानुनि परामर्श तथा अनुसिक्षण कार्यक्रम समेत प्रदान गरिएको थियो । अनुशिक्षण कार्यक्रमका अबसरमा उनिहरुलाई अपाङ्ग हक हित र अधिकार तथा समुदाय र परिबार जिउनका लागि उनिहरुले गर्ने र गर्नसक्ने ब्यवहारका बारेमा पनि जानकारि गराईएको थियो । छुट्टा छुट्टै रुपमा भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षत बडा अध्यक्षहरु क्रमश केदार कार्कि र चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन (भिडियो सहित)
Kumar Shrestha calendar_today १९ असार २०७८, 12:44 pm
रामेछाप १९असार ।
प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थि संघ जिल्ला समिति रामेछापले सोमबार साँझ मन्थलीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलि र राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको पुत्ला दहन गरेको छ । उसले पछिल्लो समयमा केपि ओलिको संसद विघटन लगायतका विभिन्न असंवैधानीक ,निरंकुसताबादी चरित्र , दम्भिय ब्यवहार र त्यसमा राष्ट्रपतिको अन्ध समर्थनका कारण मुलुक बर्वादि तर्फ धकेलिएको भन्दै उक्त कार्यको विरुद्ध शनिबार साँझ मसाल जुलुस सहित पुतला दहन गरेको हो ।
ओलि सरकारको गलत र असंबैधानीक कदम विरुद मोर्चाबन्दी भएका संयुृक्त विद्यार्थि संगठनहरुको घोषित कार्यक्रम अनुसार नेविसंघले साँझ मन्थलीको देवकोटा चोकबाट शंख फुकेर पुतला सहितको राँके जुलुस निकालेको थियो । विभिन्न नारा सहित निस्किएको जुलुस मन्थली बजार परिक्रमा गरि स्थानिय जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य ढोका अगाडी पुगेर समापन भएको थियो ।
मसाल सहितको जुलसका सहभागि विद्यार्थिहरुले प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपतिको गलत कदमले लोकतन्त्रको बदनाम भएको र नेपाली नागरिकहरुको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेको आरोप लगाएका थिए । त्यसका बिरुद्ध फेरी पनि विद्यार्थिहरु सडकमा ओर्लनु परेको भन्दै कदम नसच्चिए त्यसको मुल्य प्रधानमन्त्री ओलि र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि महंगो सावित हुने नेपाल विद्यार्थि संघ प्रदेश ख का क्षेत्रिय सभापति उत्तम कार्किले चेतावनि समेत दिए ।
मोटर साइकल तोडफोड र आगजनि गर्ने कार्यमा संलग्न २ जना पक्राउ
जनता भ्वाइस calendar_today १० असार २०७८, 7:23 am
असार ०८ गते रामेछापको खाँडादेवी गा.पा वडा नं.३ आपचौर स्थित बाटोमा बा.१९ प ७१ नं.को मोटरसाईकलमा आगजनी गर्ने र प्रदेश ३-०२-०१३प १३ नं. को मोटरसाइकलमा तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न रहि फरार रहेका व्यक्ती पक्राउ परेका छन। खाडादेवी गा.पा. वडा नं. ३ स्थायी वतन भइ सोही वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत बर्ष २८ को पदम बहादुर कार्की र अर्का सोही स्थान बस्ने बर्ष ३० को लक्ष्मण खत्रीलाई प्रहरिले पक्राउ गरेको हो। सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भै रहेको रामेछाप जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
रामेछाप सम्पर्क समिती दक्षिण कोरियाद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
जनता भ्वाइस calendar_today ७ असार २०७८, 2:52 pm
रामेछाप । रामेछाप सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले रामेछाप जिल्लाका एक अस्पताल सहित ८ वटै पालीका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्रिहरु उपलब्ध गराएको छ । सर्वसाधारणलाई कोभिड उपचारमा सहजता होस भन्ने उदेश्यले पालिका र अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामाग्रि आबश्यक बनिरहेको वेला सम्पर्क समितिले करिब १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएको हो ।
२/३ दिनको समय लगाएर सम्पर्क समितिका पदाधिकारिहरुले समबन्धित स्थानमा नै पुगेर पालिकामा स्वास्थ्य सामाग्रि हस्तान्तरण गरेका हुन । सम्पर्क समितिले प्रति अस्पताल र प्रति पालीका करिब १ लाख ३० हजारको दरले कुल ११ लाख ७० हजार रुपैया बरावरको स्वास्थ्य सामाग्रि उपलब्ध गराएको सम्पर्क समितिका अध्यक्ष नवीन श्रेष्ठले बताए । सम्पर्क समितिले सबै पालीकाहरुमा मेयर,प्रमुख र अस्पातलका प्रमुखहरु समेतको रोहबरमा सामाग्रि हस्तान्तरण गरिएको सम्पर्क समितिका निवर्तमान अध्यक्ष रबि प्रताप घिसिङले जानकारी दिएका छन ।
रामेछाप सम्पर्क समितिले चलाएको कोरोना राहत सङकलन अभियानबाट जम्मा भएको पैसाले हामिले स्थानिय तहमा कस्तो स्वस्थ्री सामाग्री दिदा उपयुक हुन्छ र हामिले सहयोग गरेको सामाग्रीले स्थानीय तहमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनी अभियानमा सहभागी अभियान्ता कार्यसमिती सस्थाको सल्लाहकार स्थानिय जनप्रतिनिधि र स्वास्थकर्मी लगाएतसङ समन्वय गरि सामग्री खरिद गरि हस्तान्तरण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले मन्थली नगरपालिका र उमाकुन्ड गाउपालिकालाइ एक एक ओटा अक्सिजन कन्सनट्रेटर र रामेछाप नगरपालिका, गोकुलगङगा गाउपालिका, लिखु तामकोशी गाउपालिका, खाडादेबि गाउपालिका, शैलुङ दोरम्बा गाउपालिका, सुनापती गाउपालिका र तामाकोशी अस्पतालाई एक एक थान अति उपयोगी स्वस्थ्य सामाग्री बिप्याप मेशिन( मिनि भेण्टिलेटर मेशिन ), ग्लुको मिटर, मास्क, स्यानिटाइजर, सर्जिकल ग्लोब्स लगाएत स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । यो सामग्री प्रबासी नेपाली दाजुभाईबाट सहयोग स्वरुप संकलन गरिएको रकमबाट खरिद गरिएको सम्पर्क समितिले जनाएको छ ।
रामेछाप सम्पर्क समिती दक्षिण कोरिया स्थापना 2016 सालमा भएको सामाजिक सस्था हो । प्रबासी भुमिका नेपाली दाजुभाइलाई साथ सहयोग दिनुका साथै नेपालमा आइपर्ने बिभिन्न आपत बिपदमा समेत विभिन्न सहयोग अभियान चलाइ सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
सुनकोशिमा फेला परेको २ लासको पहिचान खुल्यो
जनता भ्वाइस calendar_today ६ असार २०७८, 2:34 pm
२०७८ असार ०२ गते रामेछापको खाँडादेवी गा.पा.-४ पुछिघाट स्थित सुनकोसी नदिको किनारमा भेटिएको पहिचान खुल्न नसकेको ब्यक्तीको लाशको पहिचान खुलेको छ। उक्त लाश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपालिका वडा नं. २ बरुवा बस्ने बर्ष ६१ को ठाकुरे स्याङ्बो रहेको भनि निजको छोराले असार ६ गते सनाखत गरी पोस्टमार्टम पस्चात लास बुझेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
यसै गरि असार ०३ गते खाडादेवी गा.पा. वडा नं. १ स्थित सुनकोशी नदीको किनारमा फेला परेको पहिचान हुन नसकेको पुरुषको लास जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हेलम्वु गा.पा. वडा नं. १ हल्देवेशिका बर्ष ५० को सुनिल तामाङको रहेको भनी निजको भतिजाले सनाखत गरेका पनि प्रहरी नायब उपरिक्षक ढुङ्गानाले बताए।
मल चाहियो सरकार !
जनता भ्वाइस calendar_today ४ असार २०७८, 4:32 am
यो ज्यान कृषि सामाग्री केन्द्रमा पुगेको थियो । सिन्धुली स्थित २ नम्बर बजारमा रहेको कृषि सामाग्री केन्द्र । जहाँ बाट नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप कृषकलाई युरिया मल बितरण गर्छ । रामेछापमा मल चाहिए पनि सिन्धुली पुग्नुपर्छ । रामेछापले मल, बीउको नाममा सहकारीलाई सिफारिसको कागज थम्याउछ।
घरमा पुग्दा मकै हुर्किदै रहेछ्न। घरमा बुढा बाबा-आमा हुनुहुन्छ। मकैले युरिया मल खोज्यो, थाहा पाए जति ठाउँमा अनुनय बिनय गरे मल छैन ।मल ल्याउने प्रक्रिया खोज्न सुरु गरेँ । गाँउको आफैले हातेमालो गरेको सहकारी मार्फत मल ल्याउने छलफल भयो। मैले कृषकलाई मल ल्याउने खुशी के सुनाएको थिए, भर्खर पानी परेर रहदा जस्तो हरियाली देखिन्छ त्यो भन्दा ज्यादा कृषक खुशी भए ।
सहकारीका साथीहरू सहित मल लिन ट्र्क लिएर लागियो सिन्धुली । अब मल ल्याउने कृषक खुशी हुन्छ्न र केही अनुपात अन्न बढी फल्छ यस्तै एक बोरा, बोरा मात्र दिने अहिलेलाई भनेर सल्लाह गर्दै ठूलो सपना बोकेर कृषि सामाग्री केन्द्र सिन्धुली भित्र पसियो । ३ थान कर्मचारी, हाकिमको खाना खाने समय, एक जना बाहिर एक जना अफिसमा आफ्नै तालमा को गयो, को आयो केही जानकार छैन, हाम्रो सबै कुरा सुनाउदा हाकिम आएपछि मात्र भन्नू कर्मचारी तन्त्र देखियो।
हाकिमसाबको सवारी भयो, अनि हाम्रो कुरा सुनेर ५४ डिग्री कुर्सी बनाएर भर्खर खाएको खानाको आनन्द लिदै अहिले मल छैन भन्ने जवाफ दिबक्स्यो । हामी छागां बाट खसे जस्तै भयौं । हामीले ट्रक लिएर आएका छौँ । कृपया मल लिएर जान्छौं, मल छैन, अहिले आउदैन आइतबार आउनु । कुरा बिहिवारको हो । बन्द छ, ट्रकको भाडा थेग्न सक्ने अवस्था छैन, छैन, खाने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, पैसा ठिक पुग्ने मात्र लगेको छ, नखाउ भने दिनभरको सिकार खाउ भने खै के खै के भयो।
हामीले ट्रकलाई पैसा तिर्यौ, र जान अनुमति दियौं, हामी काठमाडौ आयौं, कृषक मल आउँछ हाल्छु अनि मकै सप्रीन्छ भनेर आशामा छन, अहिले हामीले फोन उठाउन सकेका छैनौं। अब ट्रकको भाडामा सहकारी बाट कति ठूलो बिवाद आउँछ, अबजस आउँछ, काममा अपरिपक्व जस्तो आरोप आउँछ, सहनुपर्छ किनकी म सामाजिक काम गर्छु भन्य अठोट लिएको छु। उता स्थानीय सरकार यस्ता कुरामा अन्जान छ। किनकी सिफारिसको कागज थम्याइ सकेको छ। गर्ब गर्न सकिन्छ म कृषि प्रधान देशको नागरिक, म कृषिलाई प्रबर्द्धन गर्छु भनेर? कृषकलाई मल चाहियो सरकार ।
काङ्ग्रेस युवा नेता खड्काद्वारा पत्रकार संकट कोषलाई आर्थिक सहयोग
जनता भ्वाइस calendar_today २ असार २०७८, 1:20 pm
समाजसेवी तथा नेपाली काङ्ग्रेस रामेछापका युवा नेता पराग खड्काले पत्रकार महासंघ रामेछापले स्थापना गरेको पत्रकार संकट ब्यबस्थापन कोषमा १० हजार १ सय ५१रुपैया आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
युवा नेता खड्काले केहि समय अघि डाँफे फाउन्डेशन मार्फत तामाकोसी अस्पताललाई ३ वटा अक्सिजन कन्सन्टेटर्स समेत सहयोग गरेका थिए। तिब्बत एअरलाईन्समा कार्यरत लिखूतामाकोशी गाउँपालिका वडा नं ५ निबासी खड्का संकटका बेला सेवामा अहोरात्र खटिने गर्छन् ।
खड्काले लिखूतामाकोशी गाउँपालिकाका लागि समेत अक्सिजन कन्सन्टेटर्स हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
आलु जोन बन्दै दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका
जनता भ्वाइस calendar_today १ असार २०७८, 3:23 pm
रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको ऐतिहासिक दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका आलुको लागि पकेट क्षेत्र बन्ने भएको छ । धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र भनेर चिनिने दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका अब आलु जोनको रुपमा पनि चिनिने भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षक केन्द्र रहेको शैलुङ्गलाई अब आलु जोनले पनि छुट्टै पहिचान दिने छ । नेपालको धेरै ठाँउमा अत्यधिक माग रहेको दोरम्बाको आलुले बजारमा आफ्नो पहिचान बनाए पनि दोरम्बा आलु भन्दै अन्यत्रको आलु बेच्ने गरेकाले आफुहरुले ब्राण्डिङ गर्न लागिएको दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तानले जानकारी दिएका छन् ।
दोरम्बाका अधिकांश कृषकको मुख्य खेती आलु नै भएकाले किसानलाई आलुमा निर्भर बनाउन लागिएको अध्यक्ष मोक्तानले बताएका छन् । गत वर्ष नै यसलाई लागू गर्ने भनिएपनी कोभिड -१९ का कारण पूरा गर्न नसकिएको पनि अध्यक्ष मोक्तानले बताए । चुनावमा आफुले नागरिक संग गरेको प्रतिबद्धता र घोषणापत्र अनुसार निति तथा कार्यक्रम बनाएएर काम गरिरहेको पनि मोक्तानले बताए । दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाको छुट्टै पहिचान बनाएउन आफू लागि परेको उनको भनाइ रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष किसानलाई प्रीन्ट गरेर ५० प्रतिशत अनुदानमा बोरा उपलब्ध गराउने योजना रहेको थियो । किसानले ५० प्रतिशत मात्र तिर्दा पनि किसानलाई ठुलो भार पर्ने हुँदा आगामी श्रावण देखि नै लागू हुने गरि पुर्ण अनुदानमा प्रीन्टेट बोरा उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि आगामी निति तथा कार्यक्रममा यो योजना समावेश गरिएको दोरम्बा शैलुङ्ग गाउपालिकाका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत धिरज मरासिनीले जनाकारी दिएका छन् । ५० प्रतिशत मात्र अनुदानबाट किसान मर्कामा पर्ने भएकाले १ सय प्रतिशत नै अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको पनि मरासिनीले बताए । आलु जोनको योजना आएपछि किसानहरु खुशी भएका र आलु उत्पादनमा अझ अग्रसर हुन थालेका छन् । यो कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको आलुले बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउने र किसानहरूको जीवनस्तर माथी पुग्ने पालिकाले जनाएको छ ।
सेवा ईन्टरनेशनल र हिन्दु स्वयमसेवकले गर्यो औषधि वितरण
Kumar Shrestha calendar_today ३१ जेष्ठ २०७८, 1:10 pm
जेठ ३१ रामेछाप।
सेवा ईन्टरनेशनल नेपाल र हिन्दु स्वयम सेवक संघले रामेछापमा विभिन्न औषधि वितरण गरेको छ । सो दुबै संस्थाहरू मिलेर फोर्टिप्लेक्स, जुलिड,स्कर्भिट, सिटाफोन, डेट्रिज लगायतका औषधिहरू वितरण गरेको हो ।
संस्थाले खाँडादेवी ४ को वडा कार्यालयमा ५० प्याकेट, मन्थली नगरपालिका ७ भटौलीको स्वास्थ्य चौकीलाई ४० प्याकेट, मन्थली प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० प्याकेट र रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ८ लाई ५० प्याकेट गरि १ सय नब्बे प्याकेट औषधि वितरण गरेको हिन्दु स्वयमसेवक मन्थली नगर संबाहक संतोष मैनालीले बताए । यो संस्थाले यस्तै औषधिहरू रामेछापका धेरै ठाउँमा वितरण गर्ने पनि मैनालीले बताए ।
उपत्यकामा आजदेखि कुन क्षेत्र कहिले खुला ?
जनता भ्वाइस calendar_today ३१ जेष्ठ २०७८, 4:33 am
जेठ ३१, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक दर्जन क्षेत्र सर्तसहित खुला रहने गरी निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त सुरक्षा समितिले आइतबार असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपेको हो ।
तर तोकिएका र अनुमतिबाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन, शैक्षिक संस्था, सभा÷सम्मेलन, जुलुस, सिनेमा हल, मठमन्दिर (नित्यपूजाबाहेक) लगायतमा निषेधाज्ञा यथावत् रहनेछ ।
पछिल्लो आदेश आजबाट लागू हुनेछ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले असार १ गतेबाट आर्थिक क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान गर्दै लैजाने नीतिअनुसार केही क्षेत्रलाई सर्त राखेर सञ्चालन गर्न दिइने बताउनु भयो । अब दैनिक उपभोग्य वस्तु किनबेच बिहान ११ बजेसम्म खुला हुनेछ ।
वाणिज्य/विकास बैंक, वित्त संस्था निर्वाध तथा सहकारी र रेमिट कम्पनी आइतबार र बिहीबार खुला गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ । पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसल बिहान ११ बजेसम्म खुल्नेछन् । अत्यावश्यक सेवा (औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर) कृषि/मलखाद/बीउ तथा खाद्यान्न सामग्री ढुवानीका कार्यालय (ढुवानी गर्दा मात्रै) खुला रहनेछन् । अनलाइन तथा टेक–अवे सेवा, होम डेलिभरी साँझ ७ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । हाल उपत्यकासहित ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ ।नेपालीनेटवर्क
कोरोनाको भ्याक्सीनको दुरुपयोग
जनता भ्वाइस calendar_today २९ जेष्ठ २०७८, 10:04 am
रामेछाप । सरकारले ६२ वर्षदेखि ६४ उमेर समुहका जेष्ठ नागरीकहरूका लागि रामेछाप पठाएको कोरोना विरूद्ध खोप चरम दुरूपयोग भएको छ । कोरोना खोप दुरूपयोग गर्नेहरूमा रामेछाप नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका लगाएत प्राय सवैजसो गाउँपालिका रहेको छ । जेठ २६ र २७ गतेका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका वाहिर ६२ वर्षदेखी ६४ उमेर समुहका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि लक्षित गरी पठाएको भ्याक्सीन रामेछापमा नगरपालिका र पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखहरूकै निर्देशनमा दुरूपयोग भएको श्रोतको दावी छ ।
श्रोतका अनुसार रामेछाप नगर स्वास्थ्य शाखा र मन्थली नगर स्वास्थ्य शाखाले ६२–६४ वर्ष उमेर समुहका नाममा स्वास्थ्यकर्मी निकट र आफन्त तथा रामेछाप नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेका शिक्षकहरूले कोभिड विरूद्धको भेरोशेल खोप लगाएको प्रमाण बाहिर आइसकेपछि अनियमितता प्रकरण बाहिर आएको हो ।
सो वडामा वडा अध्यक्षकै निर्देशनमा शिक्षक तथा त्यस वडाका पहुँचवालाहरूले खोपको दुरूपयोग गरेका छन् । सरकारी निर्देशन र मापदण्ड विपरित संस्थागत समन्वय नै नगरि शिक्षक र पहुँचवालाहरूले खोप लगाएर खोपको दुरूपयोग गराएको भन्ने सम्वन्धमा रामेछाप नगर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरेले ठाडै प्रतिवाद गरे । उनले भने– पालिकाले गरेको यस खालको अनियमितता प्रति महासंघको गम्भिर आपत्ति रहेको छ । हैन भने शिक्षकका नाममा राज्यले विभेद गरेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु ठिक हैन ।
रामेछाप नगरपालिका स्वास्थ्य प्रमुख विष्णु कार्कीले भने खोपको दुरूपयोग नभएको दावी गरेका छन् । कतिपय वडाहरूमा निर्धारित उमेर समुहका मानिसहरू उपस्थित नभएकाले खोप नष्ट हुनसक्ने भन्दै आफुहरूले अन्य उमेर समुहका मानिसहरूलाई खोप लगाएको कार्कीले बताए । यसवारेमा नगरले सम्वन्धित वडा अध्यक्ष र त्यहाँको वडा स्वास्थ्य प्रमुखहरूकै रोहवरमा खोप बुझाएकाले यसमा नगरको कुनै पनि दोष नरहेको उनको दावी छ ।
सरकारले निश्चित उमेर समुह किटान गरि जेष्ठ नागरिकहरूको लागि किटान गरेको खोप सम्वन्धीत पक्षवाटै दुरूपयोग भएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । रामेछाप स्वास्थ्य केन्द्रवाट खोप लगाउनेहरूमा रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू, नेकपा एमाले र अन्य पार्टीका समेत नगरस्तरीय नेताहरू र नगर शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू रहेका छन् ।
यता मन्थली नगरपालिकामा सरकारी सूचनाका आधारमा खोप लगाउन पुगेका मन्थली नगरपालिका वडा नं ३ का ६४ वर्षिय मोहन वहादुर थापा दिनभरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीमा खोपको प्रतिक्षामा बसेर खोप नलगाई फर्किन परेको गुनासो गर्छन् । आफुसँगै लाइनमा बसेका आफु भन्दा कान्छा र जेठो उमेरका दुवै थरीका जेष्ठ नागरिहरूले पहुँचको आधारमा खोप लगाए तर आफ्नो भने कुनै पनि आधार नभएकाले दिउँसभरी मन्थलीको तातो घाम कुरेर खोप नै नलगाई फर्कनु परेको पनि थापाको बताए ।
यसरी खोप लगाउनेहरूमा स्वास्थ्यकर्मीका आफन्त, नागरिक समाजका अगुवा, राजनितिक कार्यकर्ता, पहुँचवालाहरू र कोरोना संक्रमण भएको चार हप्ता पुरा नभएका व्यक्तिहरू समेत रहेको मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रोतले बताएको छ ।
दुई नगरपालिका वाहेक अन्य गाउँपालिकामा पठाएको खोप पनि मापदण्ड भित्रका नागरिकहरू उपस्थित नभएको भन्दै त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी,जनप्रतिनिधिहरुको नजिक र आसपासका नागरिकहरूलाई खोप लगाएको बताइएको छ । यसपटक सरकारी मापदण्ड भित्र नपरेका नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत खोप लगाएका छन् ।
तर प्रहरी श्रोतले भने– नेपाल प्रहरीले ७९, शसस्त्र प्रहरीले २६ र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारी ८ जनाले मात्र खोप लगाएको दावी गरेको छ ।नेपाल प्रहरीका लागि १ सय ६४, शसस्त्र प्रहरीको लागि ४० र जिल्लाका संचारकर्मीहरूका लागि २० गरि २ सय २४ भ्याक्सिन मन्थलीका लागि आएको थियो । जसमा प्रहरी फोर्सले १ सय १५ ले मात्र लगाएको थियो भने सञ्चारकर्मीले कसैले पनि खोप लगाउन पाएनन् ।
तर मन्थली नगर स्वास्थ्य कार्यालयले भने सबै खोप ६२–६४ वर्षका जेष्ठ नागरिकहरूले लगाउनु पर्नेमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले जर्वजस्ती लगाएको दावी गरेको छ । सम्वन्धीत पालिकालाई सरकारी मापदण्ड अनुसार खोप लगाउन निर्देशन जारी गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका जनस्वास्थ्य अधिकृत भुवन थापाले बताए । सोही आधारमा कार्यालयले रामेछाप नगरपालिकालाई पहिलो पटक ३ सय र दोश्रो पटक ४ सय ५० भायल खोप पठाएको थापाले बताए ।त्यसैगरी गोकुलगंगा गाउँपालिकालाई २ सय, उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई २ सय, सुनापति गाउँपालिकलाई १ सय ५०, दोरम्वा गाउँपालिकालाई १ सय २५, खाँडादेवी गाउँपालिकालाई १ सय ३०, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकालाई १ सय ३० र मन्थली नगरपालिकालाई पहिलो पटक ३ सय र दोश्रो पटक १ सय ५० भायल पठाएको भए पनि कतीपय पालिका र वडाहरूमा खोपको दुरूपयोग भएको सूचना कार्यालयलाई प्राप्त भएको थापाले वताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मध्यस्तकर्ता मात्र भएको र सबै खोप केन्द्रवाट खोपको विवरण प्राप्त नभएकाले आधिकारीक रूपमा यसै भन्न नसक्ने अवस्था भएको थापा बताउँछन् । यदी खोपको दुरूपयोग भएको हो भने सम्वन्धीत पालिकाको स्वास्थ्य शाखाका पदाधिकारीकै जिम्मामा हुने बताए । यसवाहेक कार्यालयलाई राजनितिक रूपमा पनि खोपको लागि व्यापक दवाव आएको गुनासो पनि थापाले गरे ।
खोप अनियमितता र प्रहरीले पनि खोप प्रयोग गरेको सम्वन्धमा रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजुले ६२–६४ उमेर समुहका जिल्लामा करिव २ हजार ६ सय मात्रै जेष्ठ नागरिक भएको र बाँकी रहेको खोप सुरक्षाकर्मीहरूलाई र संञ्चारकर्मीहरूलाई क्रमशः दिने निर्णय जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेको बताए ।
उनले आफुले अनियमितता भएको भन्ने सूचना पाएपछि प्राप्त खोपको विवरण खपत खोप र उमेर समुहका नागरिकहरूको संख्याको वारेमा आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विबरण पेश गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।
रामेछापमा पाईदैन रासायनिक मल
जनता भ्वाइस calendar_today २९ जेष्ठ २०७८, 9:29 am
रामेछाप । यसबर्ष पनि रामेछापमा रासायनिक मल अभाव भएको छ । रामेछापका किसानहरुले बिगतका बर्षमा बेहोर्नु परेको सास्ती यो बर्षपनि बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । समयमै मल नपाउँदा किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन । गाई भैंसीको मल प्रयाप्त नहुने हुँदा किसानहरु रासायनिक मलमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता रामेछापका किसानको रहेको छ । किसानको आवस्यकता अनुसारको रासायनिक मलको लागि कृषि सामाग्री केन्द्रलाई जानकारी गराइएको भए पनि हाल सम्म पनि उपलब्ध गराउन नसकेको पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
किसानको समस्या चाँडै समाधान गर्न पालिका लागिरहेको र रासायनिक मलको समस्या हुन नदिने लिखु तामाकोसी गाँउपलिकाले जनाएको छ । जसरी हुन्छ किसानले खेती लगाउने बेला सम्म आफुले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् । सुनापती र दोरम्बा गाँपालिकामा पनि समस्य उस्तै रहेको पलिकाहरुले जानकारी दिएका छन् । मल लिनको लागि पटक पटक गाडी पठाउँदा पनि बनेपाको साल्ट ट्रेडिङले खाली पठाएको सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाले बताए । किसानको बिगतमा किसानले भोगेको समस्या यो बर्ष नहोस् भनेर लाग्दा पनि सम्बन्धित निकायले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको लामाको भनाई छ ।
विभिन्न कृषि सहकारीलाई रासायनिक मल आपूर्ति गरेर किसानलाई सहज बनाउन स्वीकृति दिएको भए पनि किसानको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको दोरम्बा गाँउपालिकाका कृषी शाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले ले जानकारी दिएका छन् । किसानले जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला मात्र माग गरेकाले यस्तो समस्या आएको उनको भनाई रहेको छ ।
किसानलाई रासायनिक मल अभाव नहोस् भनेर उमाकुण्ड गाँउपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला कार्की संयोजकत्वमा समिति बनाएर आपूर्ति सहज गराउने प्रयत्न गरेको थियो । तर पालिकामा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको उमाकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला कार्की बताउछिन् । आफुहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेको र सम्बन्धि निकाय संग कुरा गरिरहेको पनि कार्कीले बताइन् । रामेछापको बिकट गाउँ गुम्देल रहेको गाउँपालिका हो उमाकुण्ड गाउँपालिका ।
मन्थली नगरपालिकाको वडा नं १ बाहेक बाकी सबै वडामा रासायनिक मल हाहाकार भएको छ । आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न कृषि सहकारीलाई अनुमति दिएको भए पनि रासायनिक मल पाउन नसकेको मन्थली नगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष तरणी शंकर अधिकारीले बताएका छन् ।
यता मन्थली नगरपालिकाले भने माग गर्न आउने सबैलाई सिफारिस दिएर पठाएको बताएको छ । नगरपालिका भित्रका १४ वटै वडामा एक एक वटा सप्लायर्स छनोट गरि आपूर्तिको लागि सिफारिस गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख योवन राज सुनुवारले जानकारी दिएका छन् । सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानले मार खेप्नु परेको पनि सुनुवारको भनाइ छ । रामेछाप नगरपालिकामा भने आंशिक रुपमा रासायनिक मल ल्याएको भएपनी पुर्ण रुपमा नपुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । दुईवटा नगरपालिका र छ वटा गाँउपलिका रहेको रामेछापमा केही पालिकाले भने समयमै आफ्ना किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराएको जनाएका छन् ।
यस्तै खाँडादेवी गाँउपालिकाले भने समयमै किसानलाई आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । बिगतका बर्षमा धेरै झमेला भएकाले यो बर्ष समयमै किसानको माग अनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराएको खाँडादेवी गाँउपलिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । गोकुलगंगा गाउँपालिकाले भने सधैं रासायनिक मल अभाव भइरहने समस्या नआओस् भनेर किसानहरुलाई प्राङ्ग्रारिक मल उत्पादनमा जोड दिएको छ । अभियान नै संचालन गरेर किसानहरूलाई प्राङ्ग्रारिक मल उत्पादन गर्न आह्वान गरेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले जानकारी दिएका छन् । रामेछापमा वार्षिक युरियामल ३ हजार ७ सय ५२ टन , डिएपी मल १ हजार ९ सय ५७ टन र पोटास मल १ हजार ३९ टन आवस्यक पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
गाउँ गाउँमा बढ्दै कोरोना संक्रमण
जनता भ्वाइस calendar_today २९ जेष्ठ २०७८, 8:31 am
रामेछाप २९ जेष्ठ
रामेछाप ( रामेछाप जिल्लाको गाउँ गाउँमा कोरोनाको संक्रमण फैलने क्रम रोकिएको छैन । जिल्लाका अधिकांश ग्रामिण भेगमा अहिले संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । गाउँमा सक्रमितको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको भएपनि कोरोना परिक्षण भने घटाउँदै लगिएको छ । जिल्लाका धेरै जस्तो गाउँहरुमा अहिले कोरोनाको जस्तै लक्षण मिल्ने विरामीहरु प्रत्येक घरमा रहेका छन् ।
गाउँहरुमा संक्रमितको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका अधिकृत भुवन थापाले बताए । स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा गाउँमा सर्तकता नहुँदा यस्तो अबस्था श्रृजना भएको पनि थापा बताउ छन् । जिल्लामा अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको पनि घरमा नै मृत्यु हुन थालेको छ ।
गाउँमा परिक्षण गरिएकाहरु मध्ये कतिपय गाउँमा ८० प्रतिशत सम्ममा पोजेटिभ देखिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याकंमा उल्लेख गरिएको छ । चार दिन अगाडि जिल्लाको सुनापति गाउँ पालिकाको १ सय १५ जनामा परिक्षण गर्दा ९८ जनामा पोजेटिभ देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख जितेन्द्र कर्ण बताए । गाउँमा हुने विवाह, ब्रतवन्ध तथा अन्य सामाजिक काममा हुने जमघटहरुले संक्रमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमान सिंह मोक्तानले जानकारी दिएका छन् । उहाँले अहिले गाउँका अधिकांश घरहरुमा कोरोनासंग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएका विरामीहरु रहेको जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय आफ्नो गाउँपालिका पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सुनापति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गिता विष्टले बताइन् । तर खाँडादेवी गाउँपालिकामा भने कोरोना सन्क्रिमित घट्दो क्रममा रहेको छ । गाउँ गाउँमा सचेतना फैलाउदै अभियान नै चलाइएको खांडदेवी गाँउपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तमाङले जनकारी दिएका छन् । पालिका भित्रका नागरिकलाई समस्या पर्दा तत्काल निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइेको पनि अध्यक्ष तमाङले बताए । खांदादेवी गाँउपलिकामा हाल सम्म ५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
यस अगाडि शहरी क्षेत्रमा बढी फैलिएको कोरोना संक्रमण अहिले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । समुदाय स्तरसम्म कोरोेना फैलिएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणका लागि हम्मे हम्मे परेको छ । संक्रमण रोक्नका लागि जिल्लामा विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम देखी निषेधाज्ञा सम्मको काम गरिएको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजुले बताए ।
रामेछाप जिल्लामा बैशाख ३ गतेपछि १ हजार ७ सय ८३ जना संक्रमित भएको मध्ये १ हजार ३ सय ८८ जना निको भएर घर गइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । अहिले अस्पताल र घरमा गरी ३ सय ७९ जना र ८ जना आसियुमा सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत भुवन थापाले जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा अघिल्लो बर्ष जम्मा २ सय २४ जना मात्र संक्रमित भएका थिए । हाल सम्म रामेछापमा कोरोना संक्रमणबाट १६ जनाको ज्यान गैसकेको छ ।
जनता भ्वाइस calendar_today २९ जेष्ठ २०७८, 6:31 am
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा आज (शनिवार) पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । शनिबार दिउँसो २ बजे बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा देउवाले बैठक बोलाउनुभएको हो ।
बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक बिषयमा छलफल हुने सभापति देउवाका सहयोगी भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसले आगामी भदौमा गर्ने गरी पार्टीको महाधिवेशन तय गरेको भए पनि कार्यतालिका भने प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि सभापति देउवाले यस बिषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउनुभएको हो ।
पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न सभापति देउवालाई नेताहरुले दबाब दिईरहेका छन् भने, संविधानतः आगामी भदौमा महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
यसअघि कांग्रेसका आधा दर्जन बढी केन्द्रिय सदस्यहरुले बैकल्पिक माध्यामबाट भएपनि भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि पहल कदमी लिन सुझाव दिएका थिए । देउवाले यसअघि आफू पार्टीको महाधिवेशन गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत दाबी गरेका थिए।नेपालीनेटवर्क
गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने
जनता भ्वाइस calendar_today २९ जेष्ठ २०७८, 6:29 am
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई दिएको समयसीमा आज (शनिवार) दिउँसो ३ बजे सकिँदैछ ।
हिजो प्रदेशप्रमुख सीता पौडेलले २४ घण्टाभित्र नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
काँग्रेस लगायतका विपक्षी चारदलले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत सदस्य रहेको प्रदेशमा आज नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)सहित ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यले हिजो नै दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आज दिउँसो तीन बजेसम्म बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न समय दिएकोमा विपक्षी गठबन्धनले हिजो नै ३१ जना प्रदेश सभा सदस्य आफैँ उपस्थित भएर दाबी पेस गरेका छन् ।
नियमअनुसार प्रदेशप्रमुख पौडेलले आज तीन बजेअघि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्ति बिहीवार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेशप्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि बहुमतसहित दाबी गर्न समय दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले साथ नदिए पनि स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङेले विपक्षीलाई साथ दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुगेको हो ।
कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन गरेका छन् ।नेपालीनेटवर्क
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा भिडभाड
जनता भ्वाइस calendar_today २८ जेष्ठ २०७८, 6:15 am
रामेछाप – रामेछापको मन्थलीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखामा धेरै भिडभाड देखिन थालेको छ । हप्तामा तीन दिन मात्र खोल्ने उक्त शाखामा सेवाग्राही बिहानै देखि लाइन बसिरहेका हुन्छन् ।
बैंक बाहिर लाइमा बसेका सेवाग्राहीले माक्स लगाएपनि भौतिक दुरी कायम गरेको देखिदैन । कोरोना भाइसको बढ्दो संक्रमण संगै स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा यसको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तो भिडभाड देख्दा पनि प्रशासन भने देखेको नदेखै जस्तो गरिरहेको छ । ड्युटीमा रहेका प्रहरी पनि त्यही भिड नजिकैबाट हिड्दा बैंक अगाडिको भिड देखे नदेखे जसरी हिडेको प्रस्टै देखिन्छ । बैंकमा देखिएको भिडले गर्दा सर्ब साधारणमा त्रास पैदा गरेको छ ।
बजार पसल तोकिएकै समयमा बन्द गर्न लगाउने प्रशासनले बैंक अगाडिको भिड किन नदेखेको होला एक ब्यापारीले प्रश्न गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्नु राम्रो हो तर भिडभाड गरेर गर्नु नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।
केही दिनभित्रै भारी वर्षा हुने
Kumar Shrestha calendar_today २८ जेष्ठ २०७८, 2:51 am
शुक्रवार, जेठ २८
काठमाडौं । नेपालमा अब केही दिनमा पूर्वबाट मनसुन भित्रिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । बङ्गालको खाडीबाट मनसुन विकसित भइसकेको र त्यो नेपाल आउने क्रममा रहेको वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले केही वर्षा बढ्न थालेको र आगामी हप्ताबाट भने ठाउँठाउँमा भारी वर्षासमेत हुने जानकारी दिनुभयो । मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव कायम रहेको छ ।
त्यसले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश नं १ का केही भेगमा वर्षा भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पनि वर्षा भएको छ । आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ ।
देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र धेरै स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको हुनेछ । मौसमविद्हरूका अनुसार सामान्य रूपमा विगत १० वर्षयता जुन १० मा मनसुन भित्रिएर सेप्टेम्बर २३ मा बाहिरिन्थ्यो ।
यस वर्षदेखि मनसुन भित्रिने दिन जुन १३ अर्थात् आगामी आइतबार हो । अक्टोबर २ मा बाहिरिनेछ । सरदर वर्षाको आँकडा विश्लेषण गरेर मनसुनको मिति तय गरिने भए पनि कहिले कार्हीँ केही दिन ढिला र केही दिन चाँडो पनि मनसुन भित्रिने हुनसक्छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार आज २१४ वटा वर्षा मापन केन्द्र (मानव सञ्चालित ८५ र स्वचालित १२९) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरणअनुसार १०८ केन्द्रमा वर्षा भएको छ । उक्त केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा डडेलधुरा केन्द्रमा ११२ मिलीमिटर भएको छ । नेपालीनेटवर्क
रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि बने वनमन्त्री
जनता भ्वाइस calendar_today २८ जेष्ठ २०७८, 2:47 am
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि रानालाई वनमन्त्री नियुक्त गरेका छन्  । रानाको पासपोर्टमा अस्ट्रेलिया गएका व्यक्ति ११ वर्षदेखि उतै छन् ।
पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएर सभासद् भएपछि पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा रानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । सिआइबीले ०६८ सालमा रानालाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह पहिलेदेखि नै नेपालमा सक्रिय छ । यसरी विदेश पठाउँदा व्यक्तिबाट १४ लाखसम्मको लेनदेन भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
सर्लाहीका सन्तोष उप्रेती नेतृत्वको गिरोहले सभासद्को रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको थियो । त्यसका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ पासपोर्ट दिने सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
यो गिरोहले ‘नेप्लिज फोरम फर ह्युमन राइट्स एन्ड पिपुल्स डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले सभासद्हरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठीमा बोलाएको भनेर नक्कली निमन्त्रणापत्र पेस गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायतका देशबाट भिसा लिने गरेको थियो । कूटनीतिक पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई दूतावासले पनि सहजै भिसा दिने भएकाले दुरुपयोग गरिएको थियो ।
अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन सभासद्द्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई ६ वैशाख ०६८ मा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा थप दुई सभासद् शिवपुजन राय र नारदमुनि रानाले समेत रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार रानाको पासपोर्टमा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ र शिवपुजनको पासपोर्टमा म्याग्दीकै केदार पौडेल नक्कली सभासद् बनेर विदेश उडेका थिए । उनीहरू अहिले पनि अस्ट्रेलियामै छन् ।
बानियाँ र पौडेल ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए । सिआइबीले अस्ट्रेलियन प्रहरीसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूसँगै सांसद नारदमुनि सत्तारुढ दलको नेता भएकाले पनि प्रहरीले यसमा चासो दिएको छैन ।नयाँ पत्रिका
संसद विघटनपछिको राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक
जनता भ्वाइस calendar_today २८ जेष्ठ २०७८, 2:45 am
काठमाडौं । संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल गर्न आज (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ ।
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको आह्वानमा बस्ने बैठक दिउँसो २ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत निमन्त्रणा पठाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
न्यौपानेका अनुसार यो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको छ । नेतालाई पठाइएको निमन्त्रणा पत्रमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि यो बैठकमा संसद विघटनपछि अब के कसरी अघि बढ्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सरकारले संसद विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले बोलाएको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने नजाने हुनुभएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइएको भए पनि उहाँ नजाने प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।
‘प्रधानमन्त्रीको नाममा पार्टी कार्यालयमा पत्र पुगेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो’ सल्लाहकार थापा भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउने त्यसरी होइन। भेटेर छलफल गर्ने हो। यसरी बोलाएको बैठकमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्न ।’
यता, एमालेका असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका माधवकुमार नेपाल भने बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै प्रक्रिया–पद्धति मिचेर संसद् विघटन गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत पुगेको छ ।
मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सभामुख जारी संवैधानिक र राजनीतिक संकटको समाधान के हुन्छ भनेर छलफलमा जुटिरहेका छन् ।नेपाली नेटवर्कले लेखेको छ ।
जोखिम भत्ता नपाएको स्वस्थ्यकर्मीको गुनासो
जनता भ्वाइस calendar_today २६ जेष्ठ २०७८, 8:14 am
रामेछाप। रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वस्थ्यकर्मीले सरकारले घोषणा गरेको कोरोना जोखिम बापतको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले तोकेको जोखिम बापतको भत्ता एक बर्ष अघि देखिकै नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आफुहरुले पाउनु पर्ने जोखिम बापतको सुबिधा एक बर्ष अघि देखि कै नपाएको बताएका छन ।कोभिड १९ सुरु भए देखी आफुहरुले सामान्य बिरामीका साथै कोरोनका बिरामीहरुको पनि सेवा गरिरहेको तर जोखिम बापतको सुबिधा नपाएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर नबराज श्रेष्ठ बताउछन् ।
रामेछाप जिल्लाका अन्य पालिकाले पालिका भित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले तोकेको सुबिधा भन्दा पनि थप गरेर दिएको तर मन्थली नगरपालिकाले सरकारले तोकेको जति पनि नदिनेको स्वास्थकर्मी बताउछन् । घरपरिवार र आफ्नो ज्यानको प्रबाह नगरी बिरामीको सेवा गर्दा पनि सुबिधा नपाउदा काम गर्ने जोश जागर हराएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यस्तै अस्पताल ब्यबस्थापन समितिले पनि नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको र बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।नगरपालिकालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आश्वासन मात्र दिएको तर वास्ता नगरेकोप्राथमिक स्वास्थ केन्द्र मन्थलीब्यबस्थापन समितिका उपाध्यक्षबिरेन्द्र श्रेष्ठलेबताए ।
मन्थली नगरपालिकाले भने स्वास्थ्यकर्मीले बाह्रै महिनाको जोखिम भत्ता दाबी गरेकाले त्यो दिन नसकिने बताएको छ । माहामारी अवधिको सुबिधा उपलब्ध गराएको पनि मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ । जोखिमको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न बाहाना बनाउँदै बखेडा झिकेर नागरिकको स्वास्थ्य सगं खेलबाड गरेको मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताएका छन् ।
मन्थली नगरपालिका भित्र एउटा आयुर्वेदिक कार्यालय सहित २४ वटा स्वस्थ्य संस्था रहेका छन् भने तीन जना विद्यालय नर्स सहित १ सय २७ जना स्वस्थ्यकर्मी कार्यरत रहेकाछन् ।
रामेछापमा पिसिआर मेसिन नहुँदा समस्या
जनता भ्वाइस calendar_today २४ जेष्ठ २०७८, 11:21 am
छ घण्टामा आउनु पर्ने रिपोर्ट तीन दिन सम्ममा पनि आउँदैन
रामेछाप २४ जेठ ।
परिक्षण शुरु गरेको छ घण्टा भित्रमा आउने पिसिआर रिर्पोट रामेछापका नागरीकले भने तिन दिनमा पनि पाउन सकेका छैनन् । पिसिआर रिर्पोट समयमा नै नआउँदा एकातर्फ संक्रमण फैलने डर हुन्छ भने अर्कातर्फ पिसिआरका लागि स्वाब दिएका व्यक्ति र परिवारका लागि तनाव त्यत्तिनै हुने गरेको छ । समान्यतया स्वाब दिएको ६ घण्टामा यसको रिर्पोट आउने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख जितेन्द्र कर्ण बताउछन्, तर रामेछापबाट पिसिआरका लागि स्वाब पठाएको ३ दिनमा पनि रिर्पोट आउने गरेको छैन ।
पिसिआरका लागि आफुले स्वाब पठाएको तिन दिन वितिसक्दा पनि रिर्पोट नआउँदा आफुलाइ मानसिक तनाव भएको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ बताए । उनले आफुलाइ मात्र नभएर परिवारका सदस्यलाई पनि त्यतिकै तनाव हुने गरेको बताए ।
छिमेकी जिल्लाहरुमा पिसिआर परिक्षणका लागि मेसिन प्रयोगमा आइसक्दा पनि रामेछाप जिल्लामा भने मेसिन ल्याउने कुराको अत्तो पत्तो छैन । मेसिन खरिदका बिषयमा सरकारका जिम्मेवार निकायहरु प्रयास भइरहेको सतही जवाफ दिएर पन्छने गरेका छन् ।
पिसिआर मेसिन खरिद वा अन्य कुनै बिकल्पका बिषयमा आफुले प्रयास गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । यता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र कर्ण भने लामो समयदेखीको आफ्नो प्रयास सफल हुन नसकेको बताउछन् । मेसिन खरिदका लागि केहि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ५ देखी १० लाख सम्म सहयोगको आश्वासन दिएको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले पैसा नभएको भन्दै टार्ने गरेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कर्ण बताए । संक्रमणको दर दैनिक रुपमा बढ्दै जाँदा नागरीकहरुले स्वाब परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पिसिआर मेसिन खरिदका लागि कुरा उठाउँदा पनि आफ्नो आवाज कमजोर भएको नागरीक अगुवाहरु बताउँछन् ।
जनता भ्वाइस calendar_today २४ जेष्ठ २०७८, 11:10 am
काठमाडौं– गीतकार सुदन डोटेलले अहिलेको महामारी लक्षित गर्दै एउटा नयाँ पुकार गीत ‘कृष्ण अब तिमी आउ…’ बजारमा ल्याएका छन् ।उक्त गीतमा गायक कृष्ण काफ्लेको स्वर सुन्न सकिन्छ ।यो गीतलाई सरोज प्याकुरेलले संगीतबद्ध गरेका छन्।
गायक काफ्लेलाई दर्शक तथा स्रोताले देखन चम्पा, पर्ख पर्ख मायालु, मैले ढाँटेको छैन, चाखुम चाखुम जस्ता गीतमा दर्शक तथा स्रोताले मन पराइसकेका छन् । ‘कृष्ण अब तिमी आउ…’ गीतको पुकार गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको छ।
मानिसले आफूलाई अजंम्बरी र अहंकारी सोचेर कुकर्म गरेको कारणले विभिन्न खालका विपत्ती आएका छन्। हामी सबैले गल्ती गरेका छौं ।त्यसकारण गीतकार डोटेलले कृष्ण अब तिमी आउ र यो हाहाकारको स्थितिबाट विश्वका मानिसहरुलाई मुक्त गराउ भन्ने आशय यो गीतमार्फत व्यक्त गरेका छन्।
गीतलाई मनोहर सुनामले संगीत संयोजन गरेका छन् ।पुकार गीतको भिडियोमा कुवेर केसीको अभिनय छ। सुरेन्द्र श्रेष्ठको छायांकन तथा सम्पादन रहेको यो भिडियोलाई सरोज प्याकुरेलले निर्देशन गरेका हुन्।
कोरोना निको भएपछि कति समय फेरि कोरोना संक्रमण हुँदैन ?
जनता भ्वाइस calendar_today २४ जेष्ठ २०७८, 5:48 am
लन्डन । एकपल्ट कोरोना संक्रमण निको भएपछि कति समयसम्म फेरि कोरोना संक्रमण हुँदैन ? कारोना संक्रमणले विश्व नै आजित भइरहेका बेला धेरैले सोध्ने प्रश्न हो यो । हुन पनि कोरोना संक्रमणबाट पार पाएको केही समयपछि पुनः संक्रमणले छुन थालेको छ । कोरोना संक्रमणबाट अनेकौं हन्डर खाएर मृत्युको मुखबाट जोगिएकाहरू फेरि यो संक्रमणले नछोओस् भनेर कामना नै गर्छन् । संक्रमणबाट बच्न अनेकौं सावधानी पनि अपनाउँछन् । तर, त्यस्तो हुँदैन । पुनः संक्रमणले सताउँछ ।
पहिलोपटक भएको संक्रमण निको भएका कतिपय मानिस दोस्रोपटक पनि संक्रमित भएको पाइएकोबारे बेलायतका वैज्ञानिकले अनुसन्धान गरेका छन् । बेलायतस्थित युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल)का अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानबारे जर्नल लान्सेट हेल्दी लंगेभिटीमा प्रकाशित भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा गत वर्षको अक्टोबर र यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म इंग्ल्यान्डस्थित हेरचाह केन्द्र (केयर होम) मा रहेका २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई समावेश गरिएको थियो । अनुसन्धानको निष्कर्ष यो छ कि एकपल्ट कोरोना संक्रमण निको भएपछि १० महिनासम्म यो भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन ।
एन्टिबडी जाँचबाट पहिले संक्रमण भएर निको भएको पुष्टि भएका व्यक्ति १० महिनासम्म कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको अनुसन्धानमा पाइएको जनाएको छ ।
अध्ययन क्रममा पछिल्ला चार महिनायता कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिमध्ये पहिले कोरोना भइसकेका व्यक्ति ८५ प्रतिशत कम पाइएको पनि खुलेको छ ।
यूसीएलकी स्वास्थ्य सूचना विज्ञान संस्थान अध्ययनकी मुख्य लेखिका मारिया क्रुतिकोभ यसलाई निकै राम्रो खबरका रूपमा आफूले लिएको बताउँछिन् । उनले कोरोनाबाट एकपल्ट संक्रमित भइसकेका व्यक्तिमा देखिएको उच्चस्तरको प्रतिरक्षा क्षमता ढुक्क गराउने खालको पाइएको पनि बताएकी छन् । तर, उमेर अलि बढी भएका व्यक्तिमा यस्तो शक्ति कम हुन सक्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको पनि उनले बताएकी छन् ।
प्रगतिशील युवा समाजद्वारा स्वास्थ सामाग्री सहयोग
जनता भ्वाइस calendar_today २२ जेष्ठ २०७८, 10:51 am
रामेछाप । प्रगतिशिल युवा समाज दोरम्बाले सुनापती गाउँपालिका–१ गुन्सी स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामाग्री शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ । कोरोनाको दोश्रो भेरियन्ट आए सगैं गाउँ गाउँमा पनि महामारी फैलिएको छ र विभिन्न स्थानमा आइसुलेसनहरु निर्माण गरि नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास भैरहेका छन् । यस्तै सुनापती वडा नं १ गुन्सी स्वास्थ चौकीमा पनि आइसुलेसन निर्माण गरिएको थियो । समाजले उक्त आइसोलेसनलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको हो ।
स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन सिलिण्डर ५ थान, पीपीई सेट १० थान, अक्सिमिटर २ थान, थर्मलगन १ थान, डिजिटल थर्मोमिटर ५ थान, ब्लड प्रेसर नाप्ने डिजिटल मेसिन २ थान, सेनिटाइजर १५ लिटर, फेस सिल्ड १० थान, एक हजार थान सर्जिकल मास्क र ग्लोब्स २०० पिस लगायतका स्वास्थ्या सामाग्री सहयोग गरेको संस्थाका सदस्य सुशिल चौलागाईँले जानकारी दिएका छन् ।
हस्तान्तरण गरेको स्वस्थ्य सामाग्रीहरु मध्य केही आविष्कार केन्द्रले प्रगतिशील युवा समाजलाई सहयोग गरेको हो । उक्त स्वास्थ्य सामाग्रीमध्ये ५ थान अक्सिजन सिलिन्डर, पीपीई सेट १० थान, फेस सिल्ड १० थान भने केन्द्रले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको पनिबचौलागाईँले जानकारी दिएका छन ।
समाजले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संकटको बेला विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि निरंतरता दिने समाजले जनाएको छ । स्वस्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा सुनापती गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलराज श्रेष्ठ, स्वास्थ्य प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।